काठमाडौं उपत्यकामा खोलिएको कोठिको अनौठो रहस्य ! – Sidha Post 24
यति ब्यवस्थित गरिएको छ कि ग्राहकहरुलाई भित्र प्रवेश गर्न पासकोर्डको ब्यवस्था गरिएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ललितपुरको मुख्य बजार पुल्चोकमा रहेको एक अपार्टमेन्टको चौथो तल्ला भाडामा लिएर एक महिलाले यस्तो ब्यवसाय गरेको फेला परेको हो । प्रहरीले ति महिला सहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
सोमबार साँझ महानगरीय प्रहरी परिसरका टोलीले सो अपार्टमेन्टमा छा पा मा रे र संचालक गीता खड्गीसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेपछि घटनाको रहस्य खुलेको हो ।
प्रहरीका अनुसार उक्त अपार्टमेन्ट खड्गी र उनीसँग बस्दै आएका सुरज खड्गीले भाडामा लिएका थिए। प्रहरीले संचालक खड्गीसहित तीन जना युवती र तीन जना पुरुष ग्राहकलाई रंगेहात पक्राउ गरेको जनाएको छ।
वास्तविकता पत्ता लगाउन प्रहरी ग्राहक बनेर गएको थियो । ग्राहकका लागि प्रवेश गर्न कोर्ड उपलब्ध गराइन्थ्यो । प्रहरी कोर्ड लिएर गएको थियो । मोबाइलमा पठाएको पासकोड लिएर गए मात्र अपार्टमेन्टको ढोका खुल्थ्यो ।
अपार्टमेन्टभित्रै बार, सिसिटिभी र परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको ब्यवस्था पनि थियो । यस्तो ब्यवस्थित कोठी संचालन गरेको देखेर प्रहरी पनि छक्क परेको थियो । उनीहरुले एउटा ग्राहकवाट २ हजार देखि २० हजार रुपैया सम्म लिने गरेको खुलेको छ ।
धेरै चिलाए पछि क्यामेरा अगाडी राखेर सुरु गरे भिडियो हेर्न कमेन्टमा Open लेख्नुहोस !
म से:’क्सी’ फिल्म खेल्न चाहन्छु, तर परिवारको डर लाग्छ !